Kitendry ISO Espaniôla na Espaniola, iza no tokony hampiasainao? Jereo! | Avy amin'ny mac aho
Pablo Aparicio | | Solosaina Mac, Tutorials
¿Kitendry Espaniôla na fitendry ISO Espaniôla? Rehefa manangana na manomboka solosaina Apple voalohany isika dia mahita safidy iray manontany antsika raha te hampiasa ny fisehon'ny kitendry amin'ny Espaniôla na amin'ny Espaniola ISO isika.
Fa inona izany ISO ISO? Fa maninona no mihoatra ny iray? Tsy tokony hitovy ve izy rehetra? Tsia, fa ny olana mety ho hitantsika dia tsy hoe satria misy ny fisehon'ny kitendry amin'ny ankapobeny, fa kosa afaka milaza isika fa ny olana, raha misy dia Apple.
Inona no olana mahazo an'i Apple? Raha ny tena izy dia tsy hoe azo antsoina hoe olana izany, fa nanao fanovana izy ireo izay mampisafotofoto anay mpampiasa. Ka raha nanao fanovana i Apple, inona no tsy maintsy safidiko: Espaniôla na Espaniola ISO? Raha ny lojika, raha misy safidy roa dia satria mety mila ny iray na ny iray isika. Amin'ity lahatsoratra ity dia hanazava isika inona avy ny fisehon'ny fitendry ary iza amin'ireo no hofidintsika arakaraka ny karazana klavier ananantsika.
1 Kitendry ISO Espaniola na Espaniôla
1.1 Kitendry Espaniôla
1.2 Kitendry ISO Espaniola
2 Ahoana ny fomba handaminana ny kitendry ISO Espaniola
3 Ahoana ny fomba apetraka @ keyboard Mac
4 Tandindona sy lantom-peo tokana
Kitendry ISO Espaniola na Espaniôla
Mba hanazavana izay fanaingoana tokony hofidintsika dia ho hitantsika tsirairay ny tranga tsirairay hahalalantsika tsara ny fahasamihafana misy eo aminy tsirairay:
Ny safidy espaniola amin'ireo roa misy ho an'ny kitendry paoma taloha io. Araka ny hitanao amin'ny sary, dia nanisy fanalahidy sasany tsy mety amin'ny toerany aho, toy ny "C braided" (ç), ny mariky ny fanontaniana, ny marika plus ary ny hyphens.
Raha tsy mampiasa klavier izay efa taona maro ianao, be loatra ka tsy tadidiko ny fahitako azy (angamba manana fahatsiarovana ratsy izy), dia mila misafidy ny safidy manaraka ianao.
Kitendry ISO Espaniola
Ny fizarana ISO Espaniola no safidy tokony safidintsika raha manana ekipa isika somary maoderina. Ny fitendry ny sary lohateny sy izay rehetra hitantsika amidy androany dia vonona hampiasa ny safidy Espaniola ISO. Tsy mandeha lavitra intsony aho, manana Mac izay efa 7 taona aho ary tonga miaraka amin'ny fitendry izay mifanaraka amin'ny fizarana "vaovao".
Ahoana ny fomba handaminana ny kitendry ISO Espaniola
Araka ny nolazaiko tetsy ambony, tsy tadidiko ny nahita klavier misy ny fisehon'ny sary, fa misy azo atao. Raha sendra nanana keyboard taloha ianao ary nividy keyboard vaovao dia tsy maintsy atao izany ampifanaraho hampiasa ny fizarana ISO Espaniôla. Hataontsika amin'ny fanarahana ireto dingana tsotra ireto:
Manokatra ny safidin'ny rafitra izahay. Amin'ny toerana misy anao dia ao amin'ny dock, eo amin'ny ankavanana ambany.
Miditra amin'ny faritra «Kitendry» izahay.
Ao amin'ny fizarana Keyboard, dia tsindrio ny takelaka "loharanom-baovao".
Ary farany, amin'ny safidy atolotra anay dia mifidy ISO ISO izahay. Ny fanovana kely dia tsy ilaina ny mamerina ny solosaina.
Ahoana ny fomba apetraka @ keyboard Mac
Ity dia fanontaniana iray apetraky ny mpandova maro ny tenany, toa ny nanontaniako ny tenako tokony ho 10 taona lasa izay: Raha tsy manana i Mac manan-danja AltGrAhoana no hametrahako ny famantarana? Tsotra be ny valiny ka vendrana isika rehefa omena antsika: ny lakile Alt u Safidy manana (saika) fiasa mitovy amin'ny Windows AltGr. Ny zavatra tsara momba an'io zava-misy io dia ny tsy fananantsika lakile tokana eo amin'ny sisiny ankavanan'ny bara, fa manana lakilasy roa isika, ny iray amin'ny lafiny roa amin'ny bara. Ohatra, raha misotro soda isika ary te hanoratra mailaka na miantso olona amin'ny Twitter tsy mampiasa afa-tsy ny tanana ankavia dia afaka mametraka @Username fanindriana ny bokotra Alt ankavia amin'ny ankihiben-tànana ary ny 2 amin'ny peratra na fanondro.
Ary koa, raha efa nandehandeha tany am-pianarana ianao nitendry na niresaka tamina olona mahalala, dia holazain'izy ireo aminao fa tsy maintsy hampiasa ny lakilen'ny mifanohitra amin'ilay tanana izay hanindry bokotra novaina izahay, toy ny Shift ankavia mankany apetraho ny "P" Capital na zon'ny manoritra ny "A". Raha tsy maintsy manisy marika fahatelo izay mila tanana ankavanana isika ary te hanao azy haingana, dia azontsika atao ny mampiasa ny Alt Left Alt hanoratana io marika io.
sariohatra y accents miaraka amin'ny lakile iray
Fantatro ny tranganà olona izay tsy manoratra firy izay tsy tia ny hoe mila mampiasa lakile roa hametrahana taratasy, na oviana na oviana novaina. Raha izany no izy dia tokony ho fantatrao fa amin'ny Mac dia azontsika atao ny mampiasa ilay rafitra mitovy amin'ny iOS: rehefa te-hametraka marika manokana amin'ny iOS isika, izay mety accent na karazana litera hafa, dia mila tsindrio ary tazony ilay zanatsoratra mandra-pisehoan'ny safidy, toy ny «á», «à» na «ª». Ity safidy ity dia ao amin'ny Mac ihany koa, na dia somary hafa kely aza izy: raha manindry lakile isika ary mitazona azy dia haseho miaraka amin'ireo isa ambonin'izy ireo ny safidy rehetra. Azontsika atao ny mampiasa ny bokotra (zana-tsipika) hisafidianana ilay marika tadiavina na azontsika atao ny mampiasa ny iray amin'ireo isa eo an-tampony hidirantsika mivantana amin'ilay marika.
Efa nanana fisalasalana ve ianao momba ny Kitendry Espaniôla amin'ny Mac?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » Tutorials » Kitendry ISO Espaniola na Espaniôla?
Fantatro, fa inona no maha samy hafa azy, na inona no fanovana fanalahidy. Misy ve ny kitendry amerikana latina? (miaraka amin'ny lantom-peo eo ankavanan'ny P)
Jorge Nunez dia hoy izy:
Indrisy fa tsia. Tokony hataon'izy ireo mivantana miaraka amin'ny klavie espaniola amerikana latinina toy ny Samsung, HP, Dell, IBM, Lenovo, Asus, Sony, Toshiba, Acer, sns.
Valiny tamin'i Jorge Núñez
yam (@yamilaml) dia hoy izy:
Ny safidy roa dia voafintina amiko: Espaniôla ISO sy Espaniôla ihany, ary matetika dia miova amin'ny teny espaniola foana aho. Tsy haiko ny mamela ahy hanisy marika ny ISO Espaniola fotsiny fa tsy izy roa. Fantatrao?
Mamaly an'i yam (@yamilaml)
Salama Yam, hafahafa fa satria samy hafa fitendry izy ireo. Tsy azonao atao ve ny mamely ilay tandindona - izay hita eo ambany ankavia? Mijanona miaraka amin'ny Espaniôla (ISO) ianao amin'izay
enzo molina dia hoy izy:
Manana olana aho amin'ireo fanalahidy isa ao amin'ny mac-ko dia manoratra marika miaraka amin'ireo isa ohatra 12 <3º4 + 5`6`789
iza no afaka manampy ahy
Mamaly an'i enzo molina
ny zavatra tokana azoko eritreretina dia hoe manana karazana fanovana diso ianao ao amin'ny System Prefers. Avy amin'ny zavatra hizahako amin'ny Keyboard fa manana ny zava-drehetra milamina ianao.
Nani dia hoy izy:
Salama, manana olana kely amin'ny MacBook Air-ko aho, tsoriko fa tsy haiko ny mampiasa azy tsara, nomeny ahy izany, ary ohatra ny voasakana ny fampiharana iPhoto satria milaza izy fa tsy misy ho an'i Mexico, ankoatr'izay ao amin'ny App Store dia tsy afaka misintona fampiharana mahazatra toy ny Instagram Facebook spotify tumblr sns aho. Rehefa mitady azy ireo aho dia mahazo hafa tsy izy 🙁 ary amin'ny iMovie dia tsy mitondra safidy be dia be hanovana ny horonantsariko azafady fa mila fanampiana aho 🙁
Valiny tamin'i Nani
Marcelino Vázquez Vega dia hoy izy:
Ahoana no hividianana fitendry amin'ny Espaniôla?
Valio amin'i MARCELINO VAZQUEZ VEGA
Sutri dia hoy izy:
Misaotra an'i Jordi Gimenez. Ny iso Espaniôla no tsy maintsy nofidinao tao amin'ny configurement.
Valiny tamin'i Sutri
ISO dia ho an'i Amerika
ROMANIA JULIANINA dia hoy izy:
Tsy afaka mametraka mari-panontaniana aho
Valiny amin'i JULIAN ROMAN
fikotrokotroka dia hoy izy:
Misaotra betsaka, nahita lahatsoratra hafa aho, saingy tsy nandaitra tamiko. Eny ireo dingana ireo.
Mamaly an'i sensiblepalpitar
to be dia hoy izy:
voavaha ny olana, tsy maintsy mamafa ny SPANISH aho ary ISO SPANISH ihany no sisa tavela….
Amin'ny Espaniôla dia TSY MISY «ce trencada». (Jereo DRAE). Ity fitenenana ity dia ampiasaina amin'ny teny Katalàna. Amin'ny teny Espaniola dia voalaza hoe «cedilla».
Ny hetra aloany any Eropa dia mety hitombo amin'ny volana ho avy